Ikhaya » Iindawo ekuyiwa kuzo » Amagugu afihliweyo eMalta
Amagugu afihliweyo eMalta
Ifumaneka embindini weMeditera, iMalta izinzile njengendawo yewayini echumayo. Iimpawu zaseMalta azaziwa njengemveliso yewayini njengabamelwane bayo beMeditera kodwa zingaphezulu kokuzibamba kukhuphiswano lwamazwe aphesheya, bephumelela amawonga amaninzi eFrance, e-Itali nakwindawo engaphaya.
Iindidi zediliya zamazwe aphesheya ezilinywe eMalta zibandakanya iCabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carignan, Chenin Blanc, kunye neMoscato. Iindidi zemveli zibandakanya: iGellewza (indidi ebomvu enesikhumba esibomvu neerosisi) kunye neGirgentina (yemveliso yewayini emhlophe), ivelisa iwayini ezigqwesileyo zomzimba kunye nencasa.
IMalta kunye nesiqithi esingudade wayo iGozo, indawo yeziqithi kuLwandle lweMeditera enelanga elijikeleze unyaka wonke, iyenza ibeyimozulu efanelekileyo yokuvelisa iwayini ezizodwa. Ukungabikho kwemvula kwiziQithi zeMalta kuyalinganiswa nenkqubo yokunkcenkceshela. Imidiliya ikhuliswa ngeetannin ezikhethekileyo kunye nesakhiwo esiqinileyo seasidi ngenxa yenqanaba eliphezulu le-PH yomhlaba. Oku kubangela iwayini emhlophe nebomvu zombini ezinamandla okuguga aphezulu
Imbali yemiNquma eMhlophe yeMalta
Ukusukela ngo-1530 ukuya ku-1798, xa iiKnights ze-Order yase-St. John zaziphatha iMalta, le minquma mhlophe yaziwa njenge I-perlina Maltese (Ieperile zaseMalta) kuyo yonke iYurophu. Imithi yebajada yonyusa iigadi zezityebi ezityebileyo kwaye iziqhamo zazo zazisetyenziswa kwenye yeeresiphi zokutyikitya kweli lizwe - isityu somvundla. Bebekade bexabiswa ngokuhonjisiweyo nangokonqulo.
Iindidi zeminquma yaseMalta, ezinje nge-bajada kunye ne-bidni, ziphantse zanyamalala emva kokuchuma kangangeminyaka eliwaka kwiziqithi. Ngo-2010, inani lemithi lehla laya kutsho kwemithathu kuphela. Kutyalwe i-batch ye-120 yemithi yeminquma eMalta njengenxalenye yecebo leMeditera Culinary Academy yokuvelisa ioyile yomnquma kwiminquma yemveli kuphela kwiiMalta Islands. Umnquma 'weBidni', nawo uboleka igama lawo kwi-oyile yomnquma esiphumo, ifumaneka eMalta kuphela.
Abaphandi abaye bafunda ngomnquma omhlophe bathi umbala wawo oqaqambileyo yingubo yendalo. I-oyile evela kwiminquma emhlophe iyafana naleyo yeminquma emnyama naluhlaza, kodwa inobomi obufutshane ngenxa yokuphola okukrakra kwe-antioxidants ekwenza ukuba kugcinwe izinto zendalo. Yiyo loo nto incasa emnandi yeminquma emhlophe.
Ukhenketho kunye noKungcamla
Ukutyelela kunye nokuhlwaya kunokucwangciswa kwiivenkile ezikhethiweyo. Ngokuxhomekeka kwixesha lonyaka, ukhenketho lugubungela yonke imveliso ukusuka ekubiliseni kokuqala ukuya kwinkqubo yokuguga. Zikwabandakanya iimyuziyam zembali yewayini kunye namathuba okungcamla kunye nokuthenga iintlobo ezahlukeneyo zezinto zokuthambisa. Ukungcamla iwayini kunye nokutyelelwa kwezidiliya zikwacwangciswa ziiarhente zalapha ekhaya ezinje Ukhenketho lweMerill Eco.
Izisele zewayini eMalta © Malta Tourism Authority
IMeridiana ikumbindi weMalta, kwaye iiseli zewayini zineemitha ezine ngaphantsi komphakamo wolwandle.
Bavelisa iwayini eyaziwayo kwilizwe liphela eyenziwe ngewayini-yeediliya ezilinywe ngokukodwa kumhlaba waseMalta.
I-Winery Tours elandelwa yi-wine ukunambitha kwenye yeendawo ezintle ezihlelwe ngokuqeshwa nge-imeyile [imeyile ikhuselwe] okanye ngokutsalela umnxeba kwi-Estate kule nombolo 356 21415301.
Izisele zewayini zimi kwisakhiwo esithandana noMyalelo waseSt. Iindawo ezikuMarsovin kunye neendawo ekugcinwa kuzo izinto ezibubungqina bokuzinikela kukaMarsovin kwinkcubeko yewayini.
Izisele zaseMarsovin zimela izizukulwana ezine zabenzi bewayini kunye nobuchule beminyaka engama-90.
Le wayini indala kwimigqomo engeniswe ngaphakathi yom-oki wase-France okanye wase-Amerika, onika iimpawu ezithile kuhlobo lwewayini kunye nevumba layo.
Ngaphezulu kweminyaka eli-100, uDelicata uhlala eyintsapho kusapho lakwaDelicata.
Ipotifoliyo yeDelicata yeewayini ifumene amanqaku angaphezu kwekhulu lamabhaso aphesheya kubandakanya iGolide, iSilivere, kunye neemedali zeBronze eBordeaux, eBurgundy naseLondon.
Iiseshoni zokungcamla zibanjwa kuphela ngokuqeshwa kwamalungu orhwebo lokuthengisa iwayini kunye nokutya kunye nentatheli yewayini.
zabo Iidiliya zeProjekthi yeWayini eyasungulwa ngo-1994 ukukhuthaza abanini-mhlaba ukuba balime iidiliya ezisemgangathweni kwewayini. Iqela le-Delicata leengcali ngezolimo lincedise uluntu lwasezifama ukuba lutyale amakhulu ezidiliya kulo lonke elaseMalta naseGozo ngale projekthi.
I-winery encinci eGharb kwiziqithi zeMalta, ukanti kuphela kwayo evelisa iwayini ezikumgangatho ophezulu ezenziwe ngemidiliya ekhuliswe ngaphandle kokusetyenziswa kweyeza.
Imicimbi iququzelelwe ngesicelo ngokubhukisha kunye nokulinganiselwa kumaqela aphakathi kwabantu abasi-8 ukuya kuthi ga kubantu abayi-18. Zonke izidlo ziphekwe kwindawo yompheki wabucala kwaye ngexesha lesidlo, i-winemaker iveza yonke iwayini kwaye ichaza indlela efanelekileyo yokuzixabisa. Ngolwazi oluthe kratya, imeyile [imeyile ikhuselwe]
Ta 'Mena Estate
Lo mhlaba umi kwindawo entle yaseMarsalforn Valley phakathi kweVictoria neMarsalforn Bay. Ibandakanya igadi yeziqhamo, indawo yeminquma ene-1500 yemithi yeminquma, i-orenji, kunye neehektare ezili-10 zeediliya. Iyayonwabela imbonakalo ye-panzoic yeGozo Citadel kunye neenduli ezikufutshane neelali.
Kwa Ta 'Mena Estate baququzelela imisebenzi eyahlukeneyo enjengokhenketho olukhokelweyo ejikeleze indawo ekuhlalwa kuyo ilandelwa yiwayini kunye nokungcamlwa ukutya, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, i-barbecues, amashwamshwam, iiseshoni zokupheka, imisebenzi epheleleyo / enesiqingatha yosuku, njl. Njl. ukukhetha, ukwenza iwayini, ukucinezela ioyile yomnquma, kunye nokunye.
Isidiliya eMalta © Malta Tourism Authority
Iziqithi ezinelanga zaseMalta, embindini woLwandle lweMeditera, likhaya kuxinaniso oluphawuleka kakhulu lwelifa lemveli elakhiweyo, kubandakanya ubuninzi obuphezulu beeNdawo zeLifa leMveli le-UNESCO kulo naliphi na ilizwe. Valletta eyakhiwe Knights abanekratshi of St. John yenye yeendawo UNESCO kunye European Capital of Culture for 2018. Malta patrimony kuluhlu lwamatye ukusuka endala izakhiwo ilitye emi-free ehlabathini, ukuya komnye uBukhosi baseBritani oyikekayo iinkqubo zokuzikhusela, kwaye kubandakanya umxube otyebileyo wolwakhiwo lwasekhaya, lenkolo, kunye nolwasemkhosini ukusuka kumaxesha amandulo, aphakathi kunye nasekuqaleni. Ngemozulu enelanga eqaqambileyo, iilwandle ezinomtsalane, ubomi obuchumayo bobusuku, kunye neminyaka engama-7,000 yembali ebangel 'umdla, kuninzi onokukujonga nokwenza. Ngolwazi oluthe kratya ngeMalta, ndwendwela www.wendwendani.com.
Iindaba ezingakumbi malunga neMalta